Codsiga Shiinaha ee Soosaarida Qalabka Birta ah ee Warshadaha & Warshadda | Daren
Xarkaha siligga biraha ah (dibbling) waxaa loo isticmaali karaa gudaha iyo dibedda. Marka loo eego goobta isticmaalka, si fudud ayaa loo xidhi karaa oo si fudud ayaa gacanta loogu rakibi karaa. Gabowga, ladagaalanka ladagaalanka, raajada ultraviolet, cidhiidhi. Faahfaahin buuxda.
Alaabooyinka waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa isgaarsiinta, korantada, batroolka, kiimikada, deyrarka maraakiibta, buundooyinka, saldhigyada korontada, qalabka korontada, qalabka farsamada, warshadleyda, ka hortagga dabka iyo dhuumaha kale ee xiraya iyo hagaajinta, ama meelaha kale ee u baahan in la xiro oo la hagaajiyo
Xarkaha birta ahaanta / xarkaha biraha siligga ah / cajaladaha birta ahama waxay u qaybsan yihiin xaalad adag iyo xaalad jilicsan Ugu badnaan soo saar taxanaha 201 iyo 304, oo dhaafay heerarka GBT.
1. Ma sahlana in miridhku dhaco, xoog siligga oo sarreeya, iska caabbinta daxalka oo xoog leh;
2. Midab saafi ah, xirmada ka dhig mid qurux badan;
3. Kahortagga gabowga, waqtiga isticmaalka dheer;
4. Waxay ku sii wadi kartaa waxqabadka wanaagsan xaaladaha adag.
Waxay inta badan ku habboon tahay baakadaha kala duwan ee injineernimada, tiirarka, badda, saldhigyada korantada, dekedda, buundooyinka, qalabka, iwm, iyo sidoo kale ku habboon tuubooyinka qurxinta birta ah iyo qaybaha baabuurta.
Sida loo isticmaalo birta lagu buufiyo birta birta ah ee birta ah:
1. Kala bixi dhamaadka cajaladda 2-3CM ee u dhow salka suunka;
2. Ku dhaaf cajaladda shayga u baahan in la xidho oo ka gudub suunka;
3. Cajaladda si tartiib ah u mar adigoo u maraya darafka mindi ee mashiinka adkeeya suunka iyo qeybta riixeysa, isla markaana adkee afka suunka isla waqtigaas;
4. Qabo sarkaalka oo wareeji gacan qabsiga si aad u adkeysid xirmooyinka;
5. Adkaynta kadib, foorari cajaladda iyo mashiinka adkeeya cajaladda kor kor 90 kor u dhaaf si looga ilaaliyo suunka cajaladdu inay dib u soo noqdaan.
Habka kaydinta ee birta aan birta ahayn:
1. Marka la keydinaayo caaga-birta ah ee caaga lagu buufiyay, rarka waa inuu xiraa galoofisyo xirfadeed si loo hubiyo in dusha sare uu nadiif yahay. Isla mar ahaantaana, si looga fogaado xagashada dusha sare, waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo xirmooyinka fiilooyinka birta ahama ee gaarka ah si loo ilaaliyo qalabka.
2. Markaad keydinaysid, waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelatid deegaanka, sida ka saarista qoyaanka, boodhka, saliidda, saliidda saliidda iyo arrimo kale inta ugu badan ee suurtogalka ah, haddii kale waxay ku keenaysaa miridhku dusha sare, ama caabbinta alxanka oo liidata.
3. Marka qoyaanku dhexmaro inta udhaxeysa filimka iyo balaastiga caaga lagu buufiyo ee cajaladda birta ah, heerka daxalku wuu ka dheereeyaa marka uusan filim jirin Ku kaydi meel nadiif ah, qalalan oo hawo leh. Hayso xaalada baakadka asalka ah. Ka fogow iftiinka tooska ah cajaladda birta ah ee birta leh ee dahaarka leh. Filimka waa in la hubiyaa xilliyo. Haddii filimku sii xumaado (nolosha filimka: 6 bilood), waa in isla markiiba la beddelaa, haddii walxaha wax lagu duubayo la qooyay markii lagu darayo suufka, suufka waa in isla markiiba laga saaraa si looga hortago qashin dusha